विचार – Page2– गाउँपालिका
के बि राउत गाईघाट बजार जहाँ बामपंथी बिजयी भए , तुलनात्मक रुपमा यो ठाऊ बिगतको सगरमाथा अंचलकै नमुना सहर बन्यो । यो बिकास क्रम लाई निरन्तरता दिन बाम शक्तिलाई बिजयी गराऊन आवस्यक छ । भने हिजो सुंतला बेचेरै करोडौको ब्यापार गर्ने बेल्टार बजार आज सुनसान छ , यसको ध्वस्त बित्तिय अनी बाणिज्य क्षत्रलाई उकास्न अहीलेको नेत्रित्व परिवर्तन सगै गठबंधन को बिजय अपरिहार्य हुन्छ । ब्यक्ति भन्दा नीति प्रधान हुन्छ...
बुधबार, कार्तिक ०८, २०७४
भनिन्छ काम बाहेक कर्मचारीको नाम र पहिचान हुँदैन । काममार्फत नै सर्वसाधारणको मनसम्म पुग्ने, काममार्फत नै राज्य प्रणाली निर्माण गर्ने र काममार्फत नै सरकारलाई चलायमान बनाउने भएकाले कर्मचारीको मूल्य, धर्म, आचरण, बृत्ति अनि प्रवृत्ति पनि काम नै हो । राज्यइच्छा अभिव्यक्त भएका संविधान, नीति र कानुन सवैलाई सजीव बनाउने कर्मले हो । कर्म नै कर्मचारीका आचरण हो, त्यसैले उसलाई कर्मचारी भनिएको हो । शासनको...
प्रदीप गिरि अहिलेको यो प्रस्तावित चुनावी तालमेल सत्ताको तृष्णा मात्र हो । कम्युनिस्ट एकताको कुरा सर्वथा हास्यास्पद हो । आश्विन २०, २०७४-काठमाडौं उपत्यका सधैं रोमाञ्चको प्रतीक्षामा रहन्छ । तदनुरूप नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी तालमेल यस साता छापाहरूका बिकाउ समाचार भएका छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको १२ वर्षअघिको त्यो अवतरण यस्तै हर्षबढाइँसाथ भए...
प्रदीप नेपाल असोज ६ गते प्रेस काउन्सिलको स्थापना दिवस। राष्ट्रपति कार्यालयमा पुरस्कार र सम्मानको कार्यक्रम राखिएको रहेछ। सामान्य सूचनामा यस्ता कार्यक्रममा आजभोलि जान जाँगर लाग्दैन। उमेरजन्य कुरो पनि होला यो। त्यसैले म सबैलाई भन्छु, ‘कार्यक्रमको अघिल्लो दिन मोबाइलबाट सूचना दिनु होला’। बेलैमा खबर आयो। कार्यक्रमका भाषणहरू सुनेपछि मलाई लाग्यो– कार्यक्रममा आएर राम्रो काम गरिएछ। पहिलो मन्तव्य थि...
नेपाली समाजमा एउटा चल्तीको उखान छ– माछा देख्दा कुरमा हात, सर्प देख्दा बाहिर हात । यो उखानले खासगरी अवसरवादीहरुलाई ब्यंग्य गर्दछ, जो प्राप्तीमा मात्रै अघि सर्छ । नेपालको आदिवासी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका नेताज्यूहरुको सन्दर्भले पनि पछिल्लोपटक यही उखानलाई चरितार्थ ग¥यो । जुनबेला जनजाति आन्दोलन उठेको थियो अर्थात उनीहरुले आन्दोलनमा माछा देखेका थिए, त्यतिबेला सबैले कुरमा हात लगाए । केहीले माछा समा...
नेपालमा ०६२-६३ को सफल जनआन्दोलनपश्चात् राजनीतिक व्यवस्था बदलिएको छ, राजनीतिका पात्र फेरिएका छन्, सन्दर्भ र विषयवस्तु परिवर्तन भएका छन्, तर राजनीतिक संस्कारमा भने परिवर्तन भएको अनुभूति गर्न सकिएको छैन । राज्य व्यवस्थालाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन सूचनाको हक र सुशासनसम्बन्धी ऐन, कानुन जारी भए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन । राज्यको कामकारबाहीमा अपारदर्शिता, सार्वजनिक कोषको मनपरी प्रयोग,...
फेरि हामी विश्व आदिवासी दिवस (अगस्ट ९) को संघारमा आइपुगेका छौ । पटकको हिसावले यो २३ औ विश्व आदिवासी दिवस हो । यस अवसरमा आदिवासी जनजाति संघ÷संगठनहरुले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछन् । काठमाडौंमा केही दिनदेखि निरन्तर विभिन्न शिर्षक राखेर कार्यक्रमहरुको आयोजना भइरहेका छन् । एउटै कार्यक्रममा दशवटासम्म कार्यपत्रहरु प्रस्तुत भइरहेका छन् । प्रायः शिर्षकहरु स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको पहुँच, सं...
पार्टी फुट र एकतामा बाह्य चलखेल
अन्तरविरोधपूर्ण समाजमा विभिन्न दल खोल्ने गरिन्छ । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिंगीय अन्तरविरोधकै जगमा यस्ता दल अस्तित्वमा आउँछन् । तर, पछिल्लो समयमा सामाजिक अन्तरविरोधको मूल्यमा भन्दा पनि समूहगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थ र टकरावबीच दलहरू स्थापना हुने क्रमले महामारीको रूप लिएको छ । यसले गलत संस्कृतिलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । अझ कसैको रणनीतिक डिजाइन र योजनामा दलको गठन र विघटन हुने क्रम बढ्दो छ...
चुनावको रिपोर्टिङ अनुभूतिः देखेको कुरा लेख्‍न डर…
विदुर कटुवाल नयाँ संरचनामा पहिलोपटक हुन लागेको स्थानीय चुनावले गाँउघर धपक्कै बलेको थियो। गएको असार १४ गते हुने मतदानको लागि मौन अवधि सुरु भयो। उम्मेदवार तथा दलका नेताहरू साम, दाम, दण्ड, भेद सहित मतदाता लोभ्याउन दौडेका थिए। म पनि विभिन्न कोणबाट चुनावी रिपोर्टिङको दौडधुपमा थिएँ। बजार राजनीतिक दलका चुनाव प्रचार प्रसारले सामग्रीले सजिएको थियो। नेपालीमा समाजमा तीन वर्गका मतदाता छन्- उच्च वर्ग, म...
कता जाँदै छ गोरखाल्याण्ड आन्दोलन ? अब के होला ?
रवि प्रकाश /बीबीसी असारको महिना । कञ्चनजङ्घा पर्वतमा साबिककै रुपमा सूर्योदय भइरहेको छ तर त्यसलाई क्यामरामा कैद गर्ने मानिसको कमी छ । पूरा उत्तर भारत प्रचण्ड गर्मीको सास्तीमा छ । यता दार्जिलिङका मानिस भने स्वेटर–ज्याकेट लगाइरहेका छन् । यो मौसममा धेरैजसो भारतीय आरामको खोजीमा दार्जिलिङको यात्रामा निस्कने गर्दछन् । उत्तर बंगालको यो पहाडी इलाकाको अर्थव्यवस्थाको मुख्य आधार नै यही हो । व्य...